AI အများ၏ JoinFS နှင့်စာရေးတံကိုသုံးပြီးငါ့အ server ပေါ်မှာပျံသန်းစိတ်ဝင်စားမည်သူမဆို ???
မေးခွန်း AI အများ၏ JoinFS နှင့်စာရေးတံကိုသုံးပြီးငါ့အ server ပေါ်မှာပျံသန်းစိတ်ဝင်စားမည်သူမဆို ???
9 လအတွင်း4weeks ago #900 by fltbuff71
အသေးစိတ်ကို website မှာ fsxflywithmanyai.weebly.com ကိုကြည့်ပါ
ငါ 737 နှင့် 747 livery ထုပ်ဘို့ Rikooo downloads, ကိုသုံးပါ
ရေနွေးငွေ့အပေါ် multiplayer အတွက် AI အပျံသန်းပေမယ် JoinFS သည်ကြီးနှင့်သင်အခမဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်ရေနွေးငွေ့, ထောင့်ကွက်, သို့မဟုတ်အခြားပျံသန်းမှု Sim ပျံသန်းနိုင်သည်။ မရပါ
ငါ TeamSpeak သုံးပြီးမည်မဟုတ်ပါ, သူတို့အခုဆာဗာကိုအားသွင်းလိုကြည့် ....
အာဣမြို့ပျံသန်းမှုအစီအစဉျနှင့်အတူ messing ငါ့ကိုတွဲ pics ကိုကြည့်ပါ။ ငါ့ဆာဗာနှင့် JoinFS
8 လအတွင်း4weeks ago #996 by fltbuff71
Update ကို ............
များစွာသော AI အလေယာဉ်နှင့်အတူတစ်ဦးမတ် 2018 အုပ်စုတစ်စု flilght ၌ဤဆာဗာတွင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ငါ့ကိုပူးပေါင်းအတွက်မဆိုအကျိုးစီးပွားရှာနေ, စိတ်တိုးပွားသုံးပြီး ???????
8 လအတွင်း3weeks ago #1003 by fltbuff71
NOW က INPROGRESS
8 လအတွင်း3weeks ago #1007 by fltbuff71
1.677 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်